Myanmar: “Eny, tsara ny zava-drehetra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2017 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, বাংলা, Português, English
Notaterin'ny ny bilaogim-baovao Birmana MoeMaKa Media ity lahatsarin’ny Straits Times ao Singapaoro ity izay miresadresaka amin'ireo olom-pirenena Myanmar sasany sy ny hafa mandeha ao Yangon sy Singapaoro .
Mampiseho olom-pirenena Myanmar mandray ny fahatongavan'ny fianakaviany ao Singapaoro ny lahatsary ary milaza ny hafalian'izy ireo ao anatin'izany hoe milamina i Singapaoro izany, ary avy eo mampiseho olom-pirenena Myanmar milaza hoe na dia misy aza ny fandraràna mivezivezy amin'ny alina, tsy maninona izany fa misosa tsara ny zava-drehetra. “Amin'ny ankapobeny tena OK,” hoy ny lehilahy iray. “Oh, Eny, tsara ny zavatra rehetra … Ny seranam-piaramanidina, ny fiarovana sy ny fahombiazana, mandeha tsara ny zava-drehetra .. ara-dalàna avokoa”, hoy ny lehilahy iray izay toa hita fa mpanamory fiaramanidina (tsy olom-pirenena Myanmar).
Taorian'ireo fanehoan-kevitra eo ambony ireo, afaka mahita ny mpanao gazetin'ny Straits Times milaza fa “niresaka tamin'ny olona sasany izay vao avy tao Yangon ora vitsy lasa” ianao, toa toy ny tsy ratsy araka ny hitantsika amin'ny tatitry ny haino aman-jery ny toe-javatra. Ankoatra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, malalaka ny olona mivezivezy ary raharaham-barotra toy ny mahazatra ny ao amin'ny seranam-piaramanidina. “
Ary nohadihadiana ireo olom-pirenena Myanmar miala ao Yangon. Ireo vehivavy roa samy nanontaniana dia toa mihevitra fa tsy dia tena matotra ny fandehan-javatra ary nandeha tany amin'ny faritra azo antoka izy ireo. “Tsy dia tena ratsy loatra ny toe-javatra.” Hoy kosa ny vehivavy tanora iray Myanmar.
Nanontany avy eo ilay mpanao gazety: “Inona no antenainao ho hita rehefa tafavoaka ny seranam-piaramanidina?” Namaly ilay tovovavy hoe: “Mino aho fa hisosa tsara ny zava-drehetra.”
Nitatitra izany fanehoan-kevitra izany tamin'ny lahatsary ny MoeMaKa Media:
“Nampiseho fanohanana ny fihetsiketsehana milamina ao Myanmar ireo olom-pirenena Myanmar sy ny hafa manerantany sy ny fihetsika mahery setran'ny fitondrana miaramila manoloana izany. (Toy ny hetsi-panoherana teo anoloan'ny Masoivohon'i Myanmar ao Thailandy)
Naneho firaisankina sy fanohanana ho an'ireo nody an-tanindrazana tamin'ny alalan'ny fanatontosana fivavahana tao amin'ny monasitera Birmana ireo teratany Myanmar monina ao Singapaoro. Na dia izany aza, raha niahiahy momba ny toe-draharaha ao Burma ny rehetra, ny lahatsary eo ambony avy amin'ny The Straits Times kosa dia mampiseho teratany Myanmar milaza am-pifaliana fa faly izy ireo tonga ao Singapaoro ary “tsy dia ratsy” ny toe-javatra ao ankoatra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny fahanginan'ny zava-drehetra, no sady nitsiky tamin'ny fakan-tsary.”
Nitatitra ny MoeMaKa fa nandefa sary taminy mampitaha ny tena zava-misy ao Myanmar sy ny fahatongavan'ireo teratany Myanmar avy ao Yangon sy miverina ao Yangon ny bilaogera Myanmar iray monina ao Singapaoro hanazavana ny toe-draharaha.
Nilaza ny MoeMaKa fa nametraka fanontaniana ihany koa ilay bilaogera hoe ahoana ny fomba hiarovana sy hitehirizan'ireo teratany Myanmar monina ao Singapaoro ny zom-pirenena, ny teny (kolontsaina) sy ny finoan'i Myanmar ary araka izany, fotoana lehibe ho an'ny teratany Myanmar monina ao Singapaoro izany mba hamaly izany fanontaniana izany amin'ny fomba mazava.
(Mino aho fa miezaka milaza ity bilaogera ity fa mila miray hina ny olom-pirenena Myanmar rehetra ary mazava amin'ny karazana fanambarana tian'izy ireo ambara amin'izao tontolo izao amin'izao fotoan-tsarotra izao)